How to add image joomla extention (image slider ) - MYSTERY ZILLION
How to add image joomla extention (image slider )
September 2011 edited September 2011 in Joomla
every body say me ..
how to add joomla image slider ..
i'm install extension but i can't found where image is add.
please tell me brother
link : http://www.freeimagehosting.net/62a52
You can use dj image slider module. After enable yr mod_ you can see how to upload and place yr images.
မော်ကျူးမန်နေဂျာ ထဲမှာ အပေါ်ဆုံးကစာတန်းလေးမှာကြည့်လိုက် ID ဆိုတာရှိတယ် .. တခါကလစ်တိုင်း ဆန့်ကျင်ဖက် ပုံစံပြပေးတယ်.. အရင်ဆုံး အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ကောင်ကနေ နောက်ဆုံးအင်စတောလုပ်ထားတဲ့မော်ကျူး ၊ နောက်တခါနှိပ်ရင် နောက်ဆုံး မော်ကျူးကနေ အရင်ဆုံးမော်ကျုး.. အဲ့လို ပြပေးတယ်..
it 's ok image slider.
but how can work content slider
မော်ကျူးကို ရှာတွေ့ပြီ ဆိုပါတော့ ...
မော်ကျူးကို အန်နေဗလ် ပေးမယ်ဗျာ ... ပြီးရင် ကိုယ်ထားချင်တဲ့ နေရာကို တန်းပလိတ် လေးအောက်မှာ သွားကြည့်ပြီး မော်ကျူးထဲက ပိုစစ်ရှင် မှာ နေရာချိန်းပေးပေါ့... တန်းပလိတ် လေးအောက် သိချင်ရင်
www.yourdomain.com/?tp=1 ဆိုပြီးရိုက်လိုက် .... ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လောက် အကျယ်အဝန်းနဲ့
ဟုတ်အကို ပြောတာဟုတ်ပါတယ်.. ်ဒါပေမယ် ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ က
Content slider ဆိုရင် အဲ့ဒီ content ကိုပေါ်ဖို့ဘယ် နေရာမှာ ထည် ့ရတာလဲ အဲ့လို သိချင်တာဗျ..
ဥပမာ section or category or article or something ပေါ ့ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာထည် ့မှ
Conetent slider က အလုပ်လုပ်တာလဲ မသိဘူး ဗျ..
Image slider ဆိုရင် install လုပ်လိုက်တာနဲ့ componets မှာလာပေါ်တယ်ဗျ ပြီးရင်
သူ ့မှာ module နစ်ခု ပါတယ်ဗျ.. တစ်ခုက Bj image slider အဲဒါကိုအရင် install လုပ်ပြီးရင်
Module ကို install လုပ် ဒါဆို components ကနေ ပြီး ကိုယ် က control လုပ်ယုံပဲ
ဘယ်နားထားမလဲ မေးရင် left right or heder or headline အဲ့လို မျိုးပေါ.
Drop down menu ဆိုလည်း ဒီတိုင်းလိုပဲ..ဒါပေမယ် ့..
Content slider မှာက ကော ဘယ်လိုနေရာမျိုး ကနေ control လုပ်ရတာလဲအဲ့ဒါလေးသိချင်တာဗျ..
လုပ်ချင်တာက ဓာတ်ပုံပဲ ပြချင်တာလား. . ပုံရော စာပါ ပြချင်တာလား.. ဥပမာ အာဆင်နယ်မြန်မာဆိုဒ်မှာ လေ့လာကြည့်..
အဲတာ မော်ကျူးနဲ့ပဲဆိုင်မယ်... အဲ့မော်ကျူး တင်ပြီးရင် သူက ကတ်တဂို ကိုပဲ ကိုယ်စားပြုတာများတယ်..
ဆက်ရှင်အတွက် မတွေ့သေးဘူး.. ကျား ကတ်တဂို ကို ညွှန်းပေးထားရင် ကျားကတ်တဂို မှာ တင်သမျှ အာတီကယ် အကုန် အဲ့ စလိုက်မှာ စာရော ပုံပါ ပြေးနေမယ်..
Sorry ဆရာသမား က ကွန်တန့်ဆိုလို့ ကွန်တန့်လိုက်ရှာတာ ... တွေ့လဲတွေ့ရော ဒီမိုလေး ကြည့်မယ်ပေါ့..
ဒီမို ကိုဖွင့်တာ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာသွားတယ်...
အဲ့မှာ သွားကြည့် ...အောက်ဆုံးမှာ ပါရာမီတာ ကို ပုံနဲ့ပြထားတယ်.. သေချာကြည့်ရင် ရှင်းသွားလိမ့်မယ်..
သူ့သဘောက ကိုယ်ပြချင်တဲ့ပုံကို အရင်ညွှန်းတယ်..ပြီးရင် ပုံကို နှိပ်ရင်ဘယ်ကိုရောက်စေချင်လဲ ထပ်ထည့်ပေးရတယ်.. တခါ ပုံနဲ့တခါတည်း ပြချင်တဲ့စာသားကို အောက်မှာ တခါထပ်ရိုက်ပေးရပြန်တယ်..
ဒုတိယ ပုံအတွက်လဲ အထက်ပါ နည်းလည်းကောင်းပဲ.. ပုံ ၅ ပုံပြချင်ရင် ၅ ခုစလုံးကို ညွှန်းပေးရတယ်. အလုပ်ရှုပ်တယ် လက်ပေါက်ကပ်တယ်..
www.myasoc.org ကိုသွားကြည့်လိုက်... ကျွန်တော်လုပ်ထားတာ... ညာဖက်အပေါ်မှာ ပုံရော စာရော စလိုက်ပြေးထားတယ်.. အဲ့ကောင်က ကတ်တဂို တခုကို ညွှန်းပေးထားတာ..သူက ကတ်တဂို အတွက်ပဲ အလုပ် လုပ်တယ်... ဆက်ရှင် နဲ့ အလုပ် မလုပ်ဘူး.. အာတီကယ် အတွက်လဲ မလုပ်ပေးဘူး...
အဲ့မှာ ပေါ်ချင်ရင် ညွှန်းထားတဲ့ကတ်တဂိုထဲ အာတီကယ် သွားရေးယုံပဲ..ညွှန်းထားတဲ၌ ကတ်တဂို ထဲ တင်သမျှ အာတီကယ် တွေကို အစဥ်လိုက် ဖြစ်စေ ပြပေးတယ်...သူ့ဟာသူ ပေါ်တယ်... အဲ့ မော်ကျူးက ဝယ်ထားတာ..လိုချင်ရင် ပီအမ်...
ဟုတ် ကျေးဇူးပဲဗျ. အဆင်ပြေတယ် ..ဒါပေမယ့် ဗျ..
သူက Frame ရယ် panel width ရယ် ပဲပြင်လို ့ပေးထားတယ ်
ဘော်ဒါ တစ်ခု လုံးကို ပြင်ချင်ရင် အထဲဝင်ပြင်ရမယ်လား ကျွန်တော်ဆိုလို တာက ဗျ ဒီပုံ မှာဗျ.
သူက အကျယ် ကို ပုံရှိသလောက်မဟုတ်ပဲနဲ့ အကုန်ယူထားလိုက်တာ...
Destop ဆိုဒ်လောက်ကိုရှိတယ် .. ကျွန်တော် က ဒီကောင် ့ကို width 500 height 300 လောက်ပဲပြင်ချင်ရင် ပြီးရင်ဗျ.. အကို ထားသလို Left right ပေါ ့တစ်နေရာမှထားရင်ထား မထားရင်..
Menu အောက်မှာ slide အနေ နဲ့ အပြည့်ထား ချင်တာ ခက်တာက ပုံ ကိုဘယ်လို manange လုပ်ရမလဲမသိဘူး ..ဘယ်လို ထားမှာ Destop ဆိုဒ် တစ်ခုလုံးအပြည် ့ပေါ်လဲဆိုတာရယ်....
Border width height ကိုဘယ်လို ပြင်တာလဲ သိချင်တယ်..ဗျ..
http://postimage.org/image/26gc7uosk/ ပုံ 2
ဟုတ်အကိုကျေးဇူးပါ ကျွန်တော်လုပ်တာ တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီဒါပေမယ် ့ဒီကောင်က
width ရယ် height ရယ်ကိုဘယ်လိုချိန်ရတာလဲ မသိဘူး အကိုလုပ်ထားတာ ဆို page ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာဆို
ကွတ်တိပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ် ဒီကောင် က ကျတော ့အပြည် ံ့ ယူလိုက်တာ ဗျ..
Border ကို ပုံနဲ့ ကွတ်တိဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရာမှာပြောင်းရတာလဲ အ့ဒါလေး တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒီလိုဖြစ်နေတာ တယ်ဗျ..
ကွတ်တိပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ် ဒီကောင် က Border ကို ပုံနဲ့ ကွတ်တိဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရာမှာပြောင်းရတာလဲ အ့ဒါလေး တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဒီလိုဖြစ်နေတာ တယ်ဗျ..